Sidee Nadiifinta Liistadeena Macaamiisha ay ugu kordhisay CTR-keena 183.5% | Martech Zone
Waxaan ku xayeysiin jirnay bartayada aan haysanno in kabadan 75,000 oo macaamiil ah liiskayaga emailka. In kasta oo ay taasi run ahayd, haddana waxaannu la kulannay arrimo la xidhiidha samatabbixinno dhib badan oo aannu ku xannibnay fayllada spam wax badan. Inkasta oo macaamiisha 75,000 ay u muuqdaan kuwo aad u fiican markaad raadineyso kafaala-qaadayaasha emaylka, waa wax aad u xun markii xirfadlayaasha emailka ay kuu sheegaan inaysan helin emailkaaga maxaa yeelay waxay ku xayirneyd galka qashinka.
Waa bar aan caadi ahayn oo lagu jiro waana necbahay. Ma aha in la sheego xaqiiqda ah in aan leenahay laba khabiiro email oo kala duwan oo ah kafaala qaadayaal - 250ok iyo Marna ha noqon. Xitaa qaar waan qaatay ka qafaalaya khabiir Greg Kraios wareysi uu dhawaan bixiyay halkaas oo uu iigu yeedhay aniga oo ah spammer.
Muhiimadda khilaafkeygu wuxuu ahaa xaqiiqda in xayeysiiyayaashu ay raadiyaan liisas waaweyn. Liisaska e-mayllada kafaala-bixiyeyaashu kuma bixiyaan isugeyn illaa heer, waxay ku bixiyaan cabbirka liiska. Natiija ahaan, waan ogaa haddii aan nadiifiyo liistadayda, inaan ku qubaysanayo dakhliga xayeysiinta. Isla mar ahaantaana, iyada oo la dhiirrigelinayo liis weyn ayaa soo jiidan doona xayeysiistayaasha, ma ahayn ilaalinta Xayeysiiyayaashu oo filayey kaqeybgal badan.
Haddii aan jeclaan lahaa inaan u noqdo suuqgey iyo tusaale dhagaystayaashayda, waxay ahayd waqtigii waxoogaa nadiifin ah laga samayn lahaa kuweenna warside maalinle iyo toddobaadle ah liisaska:
Waxaan ka saaray dhamaan cinwaanada e-mayl liisaskeyga liiska ku jiray ka weyn hal sano laakiin weligaa ma furin mana riixin emaylka. Waxaan u xushay hal sano imtixaanka haddii ay dhacdo in ay jirto xilli xilli ah oo dadku ay ku sii jiri karaan inay ku qoran yihiin, laakiin waxaan sugayay xilligooda si ay ula socdaan joornaalka qodobbada ku habboon.
Waxaan ku orday liiska haray iyada oo loo marayo Neverbounce to ka saar cinwaannada emaylka dhibaatada leh liisaska - liisaska, tuurista, iyo cinwaanada iimaylka ee catchall.
Aniga oo og in aan garaaci doono tirada macaamiishayda si aad ah ayaan u cabsi qabay, laakiin waxay keentay natiijooyin aad u baaxad weyn kadib 2 todobaad oo aan dirayay wargeysyadeenna:
Waan ka saarnay Macaamiisha emaylka ee 43,000 in aan ururinay tobankii sano ee la soo dhaafay hadana waxaan la tagnay liiska 32,000.
Heerka meelaynta sanduuqaaga oo ku kordhay 25.3%! Weligay malayn maayo inta cinwaanada iimaylka ah ee dhimanaya ay ina jiidayaan - Waan ku faraxsanahay in Greg madaxa iiga duubay wareysigaas.
Sababtoo ah waxaan hadda ku jirnay sanduuqa sanduuqa, heerka furan wuxuu kordhay 163.2% iyo annaga heerka guji-illaa 183.5%!
Hadda, ka hor intaadan oran… si fiican, Douglas waxaad uun ku qaybisay sicirka cusub waana sababtaas inaad u kordhisay. Nope. Kani wuxuu ahaa Delta inta udhaxeysa sicirkeygii hore ee furan iyo kan cusub ee furan, iyo CTR duug ah iyo CTR cusub. Dhibaatada liistadayadu waxay ahayd gabi ahaanba inay jireen macaamiil aad u tiro badan oo hurdo ah oo aan wax dhaqdhaqaaq ah lahayn.
Weli waxaan haysannaa dhowr ISP oo dhibaato leh oo aan na gelinaynin sanduuqa, laakiin sannado yar ayaa ka horreeya meeshii aan markii hore joognay! Hadda waxaan ka fikiraynaa inaanu dhisno xeer ku saabsan adeegga emaylkeena oo si otomaatig ah u nadiifiya habkaan habeennimo. Waxaan sidoo kale ku darnay calan ikhtiyaari u ah liisaskayaga abuurka ah si aan u hubinno in weligood aan laga nadiifin, maadaama aysan weligood runti furin ama gujin emayl.
Daah-: 250ok iyo Marna ha noqon labaduba waa maalgeliyeyaasha daabacaadda Martech.
Tags: 250oksamatabbixinemaylka ctremaylka heerka gaarsiintasayid ka noqonadiifinka saarmacmiil nadiifiyatirtirin